Somaliland.Org » Xisbiga KULMIYE oo ka jawaabay hadal ka soo yeedhay Cismaan-Hindi
November 25th, 2009 Comments Off Waxaa arrin lala yaabo ku noqotay Xisbiga Kulmiye iyo guud ahaan shacabka Somaliland warka kasoo yeedhey mas’uulka Xisbiga Udub, Cisman Cabdillaahi Cigaal (Hindi) ee lagu aflagaadeeyey Xisbiga Kulmiye. Waxaa dhawaaqan kasoo yeedhey mas’uulka Udub uu ku noqoday fajiciso iyo filanwaa madaxda iyo mas’uuliyiinta Xisbiga Kulmiye, waxaana aad
loola yaabay weedhahan beenta ah ee lasoo macmalay, isla markaana aan nuxurka badan laheyn. Warsaxaafadeedkaasi kasoo yeeday Udub wuxuu sheegey inuu Xisbiga Kulmiye iyo madaxdiisu ay mar walba carqaladeeyaan tallaabo kasta oo loo qaado dhinaca taageerada xukuumada iyo waliba ictiraaf raadinta.
Waxaa kaloo warsaxaafadeedku sheegay inuu Xisbiga Kulmiye u muujinayo dunida inay Somaliland tahay goob aan xasilooneyn oo fadqalalo ka jirto, iyo wailba iyadoo ay xubno ka tirsan Xisbiga Kulmiye ay kamid yihiin kooxaha xag-jirka ah sida Al-Shabaab. Waxaa iyana kamid ahaa aflagaadada kasoo yeedhey Udub inuu Kulmiye carqaladeeyey arrimaha diiwaangelinta gaar ahaan kuwii laga qabtay gobolada Beriga.
Hadaba waxaa isweyndiin leh maxaa ku kallifay mas’uuliyiinta Xisbiga Udub inay maanta hadallada noocaniya ku dhawaaqaan. Jawaabtu way cadday oo waxaa weeye in hadda la gaadhay waqtigii Xukuumada Riyaale ay bilaabi laheyd jiho wareerinta iyo soo nooleynta khilaafka siyaasadeed ee Xisbiya